SingleCare ရဲ့ $ 10 ဆေးညွှန်းစာရင်း - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း နှိပ်ပါ ဆီးဂိမ်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေး ဖျော်ဖြေရေး သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် သတင်း၊ ရပ်ရွာ ကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> SingleCare ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးသည် ၁၀ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသည်
SingleCare ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးသည် ၁၀ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသည်
ဆေးညွှန်းနှင့်ဆေးဝါးများမရရှိနိုင်သည့်ဆေးဝါးများသည်ယူအက်စ်ရှိလူအများအပြားအတွက်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်ဟုဆိုသည် မကြာသေးမီကလေ့လာမှု အလုပ်ရှင်အာမခံဖြင့်အကျုံး ၀ င်ဆုံးသောအကျုံး ၀ င်ဆုံးသောအကျုံး ၀ င်မှုများမှာဆေးဝါးကောင်တာတွင်ကုန်ကျစရိတ်များရှိပြီး Rx ကိုတစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၁ ဒေါ်လာမှ ၁၂၃ ဒေါ်လာအထိကျသင့်သည်။ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်အောက်သည်အလုပ်ရှင်မှထောက်ပံ့သောကျန်းမာရေးအာမခံဖြင့်မပါ ၀ င်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့၏ကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်ငွေသားစျေးနှုန်းများသည်ဆေးဆိုင်ကောင်တာတွင်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။
သင်၌အာမခံရှိပါသလားသို့မဟုတ်မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါစေ၊ ဆေးညွှန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆေးဝါးများအတွက်စျေးကြီးရန်မလိုပါ။ သင်၏ SingleCare ကဒ်ဖြင့်သင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆေးဝါးများအနက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် $ 10 ထက်နည်းဘို့ရရှိနိုင်မူးယစ်ဆေးဝါး 70 နီးပါး ! သင့်တွင်အာမခံရှိလျှင်ပင်သင်၏မိတ္တူသည် ၁၀ ဒေါ်လာနှင့်အထက်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများကိုအမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် $ 10 ဆေးညွှန်းများ၏ 10 မီးမောင်းထိုးပြ။
နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကို ဦး ဆောင်သည့်အရာနှစ်ခုဖြစ်သည် ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သေဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းများ ။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါက၎င်းသည်မည်သည့်အခြေအနေမဆိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်သင်၏အန္တရာယ်ကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။ Lisinopril-hydrochlorothiazide သည် ACE inhibitor နှင့် diuretic ဆေးဝါးများဖြစ်ပြီးသွေးတိုးရောဂါကိုကုသရန်ကူညီသည်။ သင် SingleCare ကူပွန်ကိုသုံးသောအခါစျေးသက်သာသွားသည်။ ဆေးပြား ၃၀ က ၁၀ ဒေါ်လာအောက်ကုန်ကျတယ်။
2. Sulfamethoxazole / trimethoprim DS
သင်ယေဘုယျအမည်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မကျမည်အကြောင်းနေစဉ် sulfamethoxazole / trimethoprim DS , သင်က၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Bactrim နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (UTIs)၊ bronchitis, နား၊ နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်းရောဂါများနှင့်အဆုတ်ရောင်ရောဂါအပါအ ၀ င်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများစွာကိုကုသပေးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် sulfamethoxazole နှင့် trimethoprim သုံးသောပantibိဇီဝဆေးများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသောပantibိဇီဝဆေးများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ တစ်ခုတည်းတွင်၎င်းကိုသတ်မှတ်သည် အကြိမ် ၁၈.၇ သန်း ။ အချို့သောဆေးဆိုင်များတွင်ဆေးညွှန်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ဒေါ်လာ ၂၀ နီးပါးရှိသည်။ SingleCare နဲ့ဆိုရင် ၁၀ ဒေါ်လာထက်မနည်းနိုင်ဘူး။
သင်ရင်ပူနေလျှင်၊ ၎င်းသည်ထိမိသောအခါ၊ Famotidine, Pepcid AC ၏ယေဘူယျသည် coronavirus ဝတ္ထုအတွက်ကုသမှုအဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့တိုင်၎င်းသည်အစာအိမ်အက်ဆစ် - အစရှိသည့်အနာများ၊ အစာအိမ်နှင့်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (GERD) နှင့်အစာဟောင်းစားခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါများကို ပိုမို၍ ကုသမှုအဖြစ်လူသိများသည်။ SingleCare ဖြင့်စျေးနှုန်းသည်သင်၏ agita အတွက်အထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်ပါ။
Indomethacin ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာတစ်ခုမယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးများသောအခြေအနေကိုကုသသောအခြားဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တစ် ဦး ထက်ပိုသော လူ ဦး ရေ ၅၄ သန်း အချို့သောပုံစံများတွင်အဆစ်ရှိသည်။ Indomethacin သည်အရိုးပွရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အဆစ်ရောင်အဆစ်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သောရောင်ရမ်းခြင်းဆေးဖြစ်သည်။ ဤယေဘုယျဆေးသည်နာကျင်မှုနှင့်အဆစ်ရောင်ခြင်းသက်သာစေရန်လုပ်ဆောင်သည်။
5. Rena-Vite Rx
Rena-Vite Rx တစ် ဦး ဆေးညွှန်းအစားအသောက်ဖြည့်စွက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သို့ B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 နှင့် B12 တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကား ဗီတာမင်ဘီ အစာခြေလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီများမှစွမ်းအင်ကိုရိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုဖြိုခွဲခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိအောက်စီဂျင်နှင့်စွမ်းအင်များကိုသယ်ဆောင်သည်။ Rena-Vite Rx သည်အစားအစာညံ့ဖျင်းခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်သဘာဝအကြောင်းတရားများကြောင့် B ဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့သူများအားမကြာခဏညွှန်းသည်။ SingleCare ကဒ်မပါဘဲငွေစျေးနှုန်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉.၉၉ အထိရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကူပွန်များသည်ဈေးနှုန်းကို ၁၀ ဒေါ်လာအောက်အောက်သို့ယူဆောင်လာသည်။
6. Hydroxyzine HCL
Hydroxyzine HCL အများအားဖြင့်၎င်းကိုသက်သာစေနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အသုံးပြုသည်။ SingleCare နှင့်ထိပ်တန်း ၂၅ ဈေးသက်သာသည့်ဆေးညွှန်းကဲ့သို့သော ၄ င်း၏ counterxy hydroxyzine pamoate ကဲ့သို့ဤယေဘုယျမူးယစ်ဆေးဝါးသည်ပျော့ပျောင်းစေသောဆေးအဖြစ်အလုပ်လုပ်လေ့ရှိပြီးစိုးရိမ်စိတ်များသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်မှုများကိုကုသရန်မကြာခဏသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ Hydroxyzine pamoate နှင့် hydroxyzine HCL နှစ်ခုလုံးတွင်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကုသရာတွင်အသုံးဝင်သောခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်သက်သာစေနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ လူတိုင်းကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်။ ဤအရာတစ်ခုသည်အချို့သောလူနာများအတွက်အခြားတစ်ခုထက် ပို၍ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့် hydroxyzine ပုံစံသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်ပါက SingleCare သည်သင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Isoniazid တီဘီရောဂါကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်ပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူပေါင်း ၁၃ သန်းသည်အဆုတ်၏ပြင်းထန်သောရောဂါမကုသရသည့်တီဘီရောဂါခံစားနေရကြောင်းခန့်မှန်းရသည် မကြာခဏ Asymptomatic , များသောအားဖြင့်ပြင်းထန်သောချောင်းဆိုးခြင်း၊ Isoniazid သည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေသောဘက်တီးရီးယားများကိုတိုက်ထုတ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျော့နည်းစေသည့်အခြားဆေးများနှင့် တွဲဖက်၍ မကြာခဏညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အချို့သောဆေးဆိုင်များတွင်ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကုသမှုသည်ဆေးတစ်ခွက်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၅ ထက်ပိုကုန်ကျနိုင်သည်။ သင်၏ SingleCare ကဒ်သည်စျေးနှုန်းကို ၁၀ ဒေါ်လာအောက်သို့ယူဆောင်လာနိုင်သည်။
8. Amiloride HCL
Amiloride HCL ၎င်းသည်သင်၏ခန်ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုဒီယမ်နှင့်ရေကိုဖယ်ရှားပေးရန်ကူညီပေးသော diuretic (အခြားနည်းအားဖြင့်ရေဆေးပြား) ဖြစ်သည်။ ဤယေဘုယျဆေးညွှန်းကိုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်၍ နှလုံးရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကူပွန်များနှင့်အတူသင် SingleCare ကဒ်မပါဘဲသင်ထက် amiloride HCL ကိုသင်ပိုမိုသက်သာစွာသုံးစွဲနိုင်သည်။ အချို့ဆေးဆိုင်များတွင်တစ်ပြားတည်းသည်ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်ကုန်ကျနိုင်သည်။ SingleCare နဲ့အတူအဲဒီစျေးနှုန်းက ၁၀ ဒေါ်လာအောက်ကျသွားတယ်။
ဒီ $ 10 ဆေးညွှန်းစာရင်းထဲတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအများစုနှင့်မတူဘဲ, acetylcysteine မျိုးစုံလက္ခဏာများနှင့်လျှောက်လွှာ၏ Modes သာရှိပါတယ်။ Acetylcysteine ​​သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပါးစပ်၊ acetylcysteine ​​သည်လေလမ်းကြောင်းရှိချွဲများကိုလျော့စေသောကြောင့် cystic fibrosis နှင့်နာတာရှည်အဆုပ်ရောဂါရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက်မကြာခဏသတ်မှတ်ပေးသည်။
10. Triple Paste AF
Triple Paste AF အရေပြားဆိုင်ရာပြissuesနာများ၊ တဆေးကိုရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ အားကစားသမား၏ခြေထောက်၊ မြွေကိုက်ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းယားယံခြင်းများအပါအ ၀ င်အရေပြားဆိုင်ရာပြissuesနာအမျိုးမျိုးကိုကုသပေးသော over-the-counter (OTC) antifungal cream ဖြစ်သည်။ ထိုအဟုတ်, သင် OTC ကုသမှုပေါ်တွင် SingleCare ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဆေးကုသမှုဌာနသို့သွားသောမည်သူမဆိုသူတို့၏ကုသမှုကို SingleCare တွင်ပါမပါစစ်ဆေးရန်တိုက်တွန်းသည်။ ၎င်းသည်ဆေးညွှန်းမလိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများအတွက်မလိုအပ်သည့်ဆေးဝါးဖြစ်သည့်တိုင်၎င်းကိုသင်ဆေးညွှန်းရယူပြီး SingleCare ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုမိုသက်သာစေနိုင်သည်။
တစ်နည်းပြောရရင် Triple Paste AF လိုမျိုးဆေးမတိုးတဲ့ဆေးကိုသင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်၊ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံဖုန်းခေါ်ဆိုပါစို့။ သင်၏လျှော့စျေးကဒ်မှသက်သာရာရနိုင်သည်။
SingleCare တွင်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောဆေးညွှန်းအားလုံး
မင်းရဲ့ဆေးညွှန်းက $ 10 ဆေးညွှန်းစာရင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ စိတ်မပူပါနဲ့ Alexander Hamilton ထက်စျေးသက်သာတဲ့ဆေး ၄၀ နီးပါးရှိတယ်။
Rx နာမည် ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁ ။ Acetylcysteine ​​(ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Acetadote) ကူပွန်ကိုရယူပါ
နှစ်။ ADC / ဖလိုရိုက် ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃ ။ Amiloride HCL (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Midamor) ကူပွန်ကိုရယူပါ
လေး။ Amoxicillin (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Amoxil) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၅ ။ BP Gel ကူပွန်ကိုရယူပါ
၆ ။ Chlorhexidine ဂလူးကနိတ် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Hibiclens) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၇ ။ Cyanocobalamin (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Vitamin B-12) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၈ ။ Cyclobenzaprine hydrochloride (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Fexmid) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၉ ။ Denta 5000 Plus အား ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၀ ။ Dentagel ကူပွန်ကိုရယူပါ
တကျိပ်တပါး။ Diazepam (တံဆိပ်အမည်: Valium) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၂ ။ Famotidine (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Pepcid) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၃ ။ Fexofenadine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် (အမှတ်တံဆိပ် Allegra) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၄ ။ Floranex ကူပွန်ကိုရယူပါ
ဆယ့်ငါး Fluconazole (တံဆိပ်အမည်: Diflucan) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၆ ။ Flumazenil (တံဆိပ်အမည်: Romazicon) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၇ ။ Hematinic / folic acid (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Hemocyte-F) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၈ ။ Hibiclens ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၉ ။ Hydrocortisone (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Cortizone) ကူပွန်ကိုရယူပါ
နှစ်ဆယ်။ Hydroxyzine HCL (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Atarax) ကူပွန်ကိုရယူပါ
နှစ်ဆယ့်တစ်။ Hydroxyzine pamoate (တံဆိပ်အမည်: Vistaril) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၂ ။ Ibuprofen (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Advil, Motrin) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂ ။ Indomethacin ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၄ ။ Isoniazid ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၅ ။ Klor-Con / EF ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၆ Lansoprazole (တံဆိပ်အမည်: Prevacid) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၇ Larissia ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၈ Levobunolol HCL (တံဆိပ်အမည်: Betagan) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၂၉ ။ Lidocaine ထဲမှာပါတဲ့ ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၀ Lisinopril / hydrochlorothiazide (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Prinivil) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၁ ။ Loratadine (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Claritin) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၁ ။ Meclizine HCL (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Dramamine) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၂ ။ Metronidazole (တံဆိပ်အမည်: Flagyl) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၃ Niacin Flush အခမဲ့ ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃။ Nitroglycerin (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Nitrostat) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၅ ။ Ortho-Novum 1/35 ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၆ Phenazopyridine hydrochloride (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Pyridium) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၇ Phentermine HCL (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Adipex-P) ကူပွန်ကိုရယူပါ
38 ။ Polymyxin B sulfate / trimethoprim sulfate (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Polytrim) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၃၉ ။ Promethazine hydrochloride (တံဆိပ်အမည်: Promethegan) ကူပွန်ကိုရယူပါ
၄၀ ။ Rena-Vite RX ကူပွန်ကိုရယူပါ
41 Silver sulfadiazine (တံဆိပ်အမည်: Silvadene) ကူပွန်ကိုရယူပါ
42 ဆိုဒီယမ်ဖလိုရိုက် (တံဆိပ်အမည်: Denta 5000) ကူပွန်ကိုရယူပါ
43 Sulfamethoxazole / trimethoprim DS (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Bactrim) ကူပွန်ကိုရယူပါ
44 ။ Tizanidine hydrochloride (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Zanaflex) ကူပွန်ကိုရယူပါ
လေး။ Tobramycin sulfate (တံဆိပ်အမည်: Tobrex) ကူပွန်ကိုရယူပါ
46 Triamcinolone acetonide (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Nasacort) ကူပွန်ကိုရယူပါ
47 Triple Paste AF ကူပွန်ကိုရယူပါ
၄၈ ။ ဗီတာမင် D ကူပွန်ကိုရယူပါ
* အက္ခရာစဉ်အရစာရင်းသွင်းထားသောဇွန်လ ၂၀၀ ရက်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ SingleCare အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ စျေးနှုန်းများသည်လက်လီဆေးဆိုင်များနှင့်ကွာခြားပြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
လူငယ် idiopathic အဆစ် (JIA) နှင့်အတူကလေးတစ် ဦး ပြုစုပျိုးထောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏
apple cider vinegar ကဘာအတွက်ကောင်းလဲ။